मिडिया > जर्नल फोकस फोकस > पत्रिका फोकस यीशु 2021-02 > दुई भोज
स्वर्गको सबैभन्दा सामान्य वर्णन, बादलमा बसेर, रातको गाढा लगाएर र वीणा बजाउनु भनेको धर्मशास्त्रले स्वर्गलाई वर्णन गर्ने कामसँग थोरै मात्र सम्बन्धित छ। यसको विपरित, बाइबलले स्वर्गलाई महान् चाडको रूपमा वर्णन गर्दछ, सुपर-विशाल ढाँचाको चित्रको रूपमा। त्यहाँ ठूलो कम्पनीमा स्वादिलो ​​खाना र राम्रो मदिरा छ। यो अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो विवाहको स्वागत समारोह हो र आफ्नो चर्चसँगै ख्रीष्टको विवाह मनाउँछ। इसाईमतले यस्तो ईश्वरमा विश्वास गर्दछ जुन साँच्चिकै रमाइलो छ र हाम्रो प्रिय इच्छा हाम्रो साथ सदाका लागि मनाउन सक्छ। हामी सबैले यस उत्सव भोजमा व्यक्तिगत निमन्त्रणा पायौं।
किन यति गाह्रो छ?
म छक्क पर्दछु किन मानिसजातिको लागि परमेश्वर र शैतानको चाड, र परमेश्वर, हाम्रो सृष्टिकर्ता र शैतानको बिच छनौट गर्नु एकदमै गाह्रो छ, जसले हामीलाई नष्ट गर्न चाहन्छ। हुनसक्छ यो हामी आफ्नै जीवनमा कस्तो प्रकारको सम्बन्ध चाहन्छौं भनेर निश्चित छैन। मानव सम्बन्धहरू कुनै किसिमको भोज जस्तै हुनुपर्छ। एक अर्को पोषण र निर्माण को एक तरीका। एक प्रक्रिया जुन हामी बाँच्न, बढ्न, र परिपक्व हुँदा अरूलाई बाँच्न, बढ्न, र परिपक्व बनाउन मद्दत गर्दछ। जे होस्, त्यहाँ यसको डायबोलिकल प्यारोडी हुन सक्छ, जहाँ हामी एक अर्कामा नरभक्षीको जस्तो व्यवहार गर्छौं।
यहूदी लेखक मार्टिन बुबरले भने कि दुई प्रकारका सम्बन्धहरू छन्। उसले एक प्रकारको वर्णन गर्दछ "I-You सम्बन्ध" र अर्को "I-It सम्बन्ध" को रूपमा। I-You सम्बन्धमा, हामी एक अर्कालाई बराबरीको रूपमा व्यवहार गर्दछौं। हामी एक अर्कालाई भेट्छौं, एक अर्काबाट सिक्छौं र एक अर्काको बराबरीको आदर गर्छौं। I-id सम्बन्धमा, हामी एक अर्कालाई असमान मान्छे जस्तो व्यवहार गर्छौं। यो हामी के गर्छौं जब हामी केवल सेवा प्रदायक, खुशीका स्रोतहरू, वा व्यक्तिगत लाभ वा उद्देश्यको साधनको रूपमा देख्छौं।
जब म यी शब्दहरू लेख्छु, एकजना मानिस मेरो दिमागमा आउँछ। यसलाई हेक्टर भनौं, यद्यपि त्यो उसको वास्तविक नाम होईन। मलाई हेक्टर एक पादरी हो भनेर भन्न लाज लाग्छ। जब हेक्टर कोठामा जान्छ, उसले वरिपरि महत्त्वपूर्ण व्यक्ति खोज्छ। यदि बिशप उपस्थित छ भने, ऊ सीधै उसको नजिक जान्छ र उसलाई कुराकानीमा संलग्न गर्दछ। यदि एक मेयर वा अन्य नागरिक सम्मानित छ, यो पनि हुन्छ। धनी व्यापारीलाई पनि त्यस्तै लाग्छ। म एक छैनँ, त्यसैले उनले मलाई कतै धेरै बोल्थे। हेक्टरले विगतका वर्षहरुमा उनीहरुका ओहदाको बारेमा र मेरो आफ्नै प्राणको हिसाबले उनीहरु मरेको देख्दा मलाई साह्रै दुःख लाग्यो। हामीलाई बढाउनको लागि हामी-आई सम्बन्धहरू चाहिन्छ। I-id सम्बन्धहरू एकै हुँदैनन्। यदि हामी अरूलाई सेवा प्रदायक, क्यारियर चारा, स्टेपिंग स्टोनको रूपमा व्यवहार गर्छौं भने हामी कष्ट भोग्नेछौं। हाम्रो जीवन गरीब हुनेछ र संसार पनि गरीब हुनेछ। I- तपाईं सम्बन्ध स्वर्ग को सामान हो। यो I-It सम्बन्धको मामला होईन।
कसरी तपाईं सम्बन्ध मापन व्यक्तिगत मा किराया? उदाहरणका लागि तपाई पोष्टमैन, फोहोर मानिस, युवा विक्रेतालाई कसरी व्यवहार गर्नुहुन्छ? काम, शपिंग वा केही सामाजिक गतिविधिमा तपाईलाई भेट्नु भएको मानिसलाई तपाई कसरी व्यवहार गर्नुहुन्छ? यदि तपाईं कार चलाउनुहुन्छ भने, तपाईं पैदल यात्रीहरू, साइकल चालकहरू वा अन्य मोटर चालकहरूसँग कस्तो व्यवहार गर्नुहुन्छ? तपाईं कसरी सामाजिक अर्डरमा तपाईं भन्दा कम व्यक्तिहरूसँग व्यवहार गर्नुहुन्छ? खाँचोमा परेका व्यक्तिलाई तपाईं कसरी व्यवहार गर्नुहुन्छ? यो वास्तवमै महान व्यक्तिको चिनारी हो कि ऊ वा उसले अरूलाई पनि ठूलो महसुस गराउँदछ, जबकि जो साना र अवाक् हुन्छन् आत्माले विपरित कार्य गर्दछ।
केहि वर्ष पहिले मैले आर्चबिशप डेसमन्ड तूटुलाई लेख्नु पर्ने कारण थियो। मैले उनीबाट एउटा हस्तलिखित चिठी फिर्ता पाएको छु जुन म आजसम्म पनि मोल गर्दछु। अरुलाई ठुलो महसुस गर्नका लागि यो मानिस पर्याप्त छ। दक्षिण अफ्रिकामा उनको सत्य तथा मेलमिलाप आयोगको अद्भुत सफलताको एउटा कारण त्यो आफूले पाएको सबैको लागि देखाएको असुरक्षित सम्मान थियो, जसले यसलाई योग्य नदेखिने पनि देखाए। उसले सबैलाई I-You सम्बन्ध प्रदान गर्‍यो। यस चिठीमा उसले मलाई आफू जस्तै भएको महसुस गराए - म निश्चित छु म छैन। उसले केवल स्वर्गीय चाडको लागि अभ्यास गर्‍यो, जहाँ सबैले भोजमा भाग लिन्छन् र कोही पनि सिंहहरूका लागि खान हुँदैन। त्यसोभए हामी कसरी पक्का हुन सक्छौं कि हामी पनि त्यस्तै गर्नेछौं?
सुन्नुहोस्, प्रतिक्रिया दिनुहोस् र सम्बन्धित गर्नुहोस्
दोस्रो, यो निमन्त्रणा सुनेपछि, हामीले त्यसलाई प्रतिक्रिया दिन पर्छ। किनभने येशू हाम्रो हृदयको ढोकामा उभिनुभयो र ढकढक्याइरहनुभयो र पर्खनुभयो। उसले ढोका ढकढक्याउँदिन। हामीले यसलाई खोल्नुपर्दछ, उसलाई दहलीजमा आमन्त्रित गर्नुपर्दछ, व्यक्तिगत रूपमा हाम्रो उद्धारक, मुक्तिदाता, मित्र र भाईको रूपमा टेबुलमा स्वीकार्नुपर्दछ, हाम्रो जीवनमा उहाँको उपचार र रूपान्तरण गर्ने शक्तिमा प्रवेश गर्नु भन्दा पहिले।
हामीले स्वर्गीय चाडको लागि तयारी गर्न पनि आवश्यक छ। हामी यो सम्भव भएसम्म हाम्रो जीवनमा धेरै I- तपाईं सम्बन्धहरूलाई समाहित गरेर गर्छौं किनभने स्वर्गीय चाडको बारेमा सब भन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, बाइबलले प्रदान गर्दछ, खाना वा दाखमद्य होइन, तर सम्बन्ध हो। जब हामी उनीहरूका लागि तयार हुन्छौं हामीले सबैभन्दा अप्रत्याशित परिस्थितिमा सम्बन्ध स्थापित गर्न सक्छौं।
म तिमीलाई एउटा सच्चा कथा भन्न चाहन्छु। धेरै वर्ष अघि म साथीहरू र चिनेजानेका समूहको साथ स्पेनमा छुट्टीमा गएँ। एक दिन हामी शहरबाहिर गइरहेका थियौं र आशाविहीन हरायौं। हामी सुख्खा जमिनमा कसरी पुग्ने बिचार बिना नै दलदलमा समाप्त भयो। हामी कहाँबाट आएका शहरमा फिर्ता मार्ग थियो। कुरालाई अझ नराम्रो बनाउनको लागि, साँझ पर्यो र उज्यालो हुन थाल्छ।
यो गाह्रो अवस्थामा, हामी एक विशाल लामो-कपाल वाले स्पेनिसको बारेमा सचेत भयौं जुन दलदलबाट हामीतर्फ बढिरहेको थियो। उहाँ गाढा छाला र दाह्री हुनुहुन्थ्यो र बिना कपडा र ठूलो माछा मार्ने प्यान्ट लगाउनुहुन्थ्यो। हामीले उसलाई बोलायौं र मदतका लागि उहाँलाई सोध्यौं। म छक्क परें, उसले मलाई उठायो, मेरो काँधमा राख्यो, र मलाई मूरको अर्को पट्टि लग्यो जबसम्म उसले मलाई एउटा बलियो बाटोमा नलागे। उसले हाम्रो प्रत्येक समूहको लागि समान गर्यो र त्यसपछि हामीलाई जाने बाटो देखायो। मैले मेरो वालेट निकाले र उसलाई केहि बिलहरू प्रस्ताव गरे। उहाँ ती मध्ये कसैलाई चाहनुहुन्न थियो।
बरु, उसले मेरो हात समातेर हिलायो। हामीलाई सुरक्षित र आवाज नलगाउनु भन्दा पहिले उनी समूहमा सबैसँग हात मिलाए। मलाई याद छ म कति लज्जित थिएँ। मैले उसलाई I-It सम्बन्धको प्रस्ताव गरेको थिएँ र उसले आफ्नो "I-You" ह्यान्डशेकको साथ त्यसलाई परिवर्तन गरेको थियो।
हामीले उहाँलाई फेरि कहिल्यै देखेनौं, तर धेरै अवसरहरूमा मैले उहाँबारे सोच्दै आफूलाई समातेको छु। यदि मैले यसलाई स्वर्गीय भोजमा कहिले पनि बनाएँ भने, म उहाँलाई पाहुनाहरू बीच कतै भेट्दा अचम्म मान्दिन। भगवान उसलाई आशीर्वाद दिनुहोस्। उसले मलाई बाटो देखायो - र एक भन्दा बढी अर्थमा!